Arts & Humanities » ကျနော်ရယ် ကျဆိမ့်တစ်ခွက်ရယ် ခွေးတကောင်ရယ်	28
Posted by Thint Aye Yeik on Dec 2, 2014 in Arts & Humanities, Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 28 comments
ခင်ဇော် says: အိုအေ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: တိန်
တောင်ပေါ်သား says: အလက်ဆင်းရေ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဟုတ်။ ရေးရင်းနဲ့တော့ တွေးမိသား
Was this answer helpful?LikeDislike 2373
aye.kk says: မှတ် မှတ် မှတ်
kyeemite says: .ကျုပ်ပခုက္ကူ မှာနေတုန်းက အရက်စွဲနေတဲ့ခွေးကြီးတစ်ကောင် ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ဖူးတယ်
.ခွေးကြီးလည်း လျှာနဲ့ယက်သောက်ပြီး ပြန်ပြန်သွားတာပဲ ..အံ့ဘွယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3919
weiwei says: အမတို့အိမ်မှာ အရင်တုန်းက ခွေး ၆ ကောင် ရှိတယ်.. သူတို့တွေက ရေခဲမုန့်ဆိုသိပ်ကြိုက်တာ .. ထူးရေခဲမုန့်ကလဲ ၆ လုံးတွဲတစ်ဗူးဆိုတော့ ကွက်တိပဲ .. ခဏခဏသွားဝယ်ပြီး တစ်ကောင်ကိုတစ်လုံးစီ ကျွေးတာကိုများမြင်ရင် ရေခဲမုန့်ပါ ပြတ်သွားလိမ့်မယ် .. အခု သားငယ်လေးတစ်ကောင်ပဲရှိတော့တယ် .. သူကတေ့ စီပီကြက်ကြော် အရမ်းကြိုက်တယ် … ကြုံတဲ့အခါတိုင်း ၀ယ်ကျွေးဖြစ်တယ် .. တစ်ခါတစ်လေတော့ တစ်ယောက်တစ်ဝက် သူ့ဆီက ခေါင်းပုံဖြတ်တယ် …
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: @ အန်တီအေး
ဂျက်စပဲရိုး says: ချစ်တဲ့ လူတွေကျတော့လဲ အဲ့ဒီ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို လူနဲ့ မခြား ချစ်ကြတာကိုး။
အတော်လေး ပွဲစည်သွားသေးတာကို…. :P
kai says: အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နဲ့ လူ… ဆက်သွယ်မှုမှာ.. ယူအက်စ်မှာဆို.. ဥပဒေအရပါအကာအကွယ်ပေးထားတယ်..။
ဒါပေမယ့်.. ဘာသာရေးထဲဆွဲထည့်ပြီး.. တိရိစ္ဆာန်ဦးနှောက်အစားဝင်.. လူဦးနှောက်ကြီးနဲ့က ၀င်စဉ်းစား.. ခံစားပေးတာမျိုးတာ့မလုပ်.. =
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အံမယ် သဂျီးးး
ဗုံဗုံ says: မှတ်ပလား.. နီ့မှာ ဟိုကောင်လောက်တောင်
တယုတယ တိုက်မယ့်သူမရှိဘူး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: နိလို အသီးနှစ်လုံး မရှိတဲ့ ရက်စက်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းတဲ့ အညိုးတမီးတစ်ယောက် တိုက်တာကို မသောက်ရတာပဲ
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟီ ဟိ… ခွေး ကျဆိမ့်ပလပ်တာမြင်လို့ ပြတ်ရကြေးဆို ကျောက်စ်တော့ မလွယ်ကြော…
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အဟီးး
မစုဥာဏ် says: အမေရိကမှာ ဒင်းတို့ ကို အခွင့်ရေးပေးပုံများ မနာလိုစရာပါ။
မြစပဲရိုး says: မစုဥာဏ်
အခု အဲဒီမှာ ချင်ပန်ဇီ တွေ ကို Human Rights ပေးဖို့ လုပ်နေပြီ ဆိုလား။ http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-30338231
တစ်နေ့တော့ ဖွတ်ဖွတ် ကို လက်ဆွဲပြီး ကျဆိမ့်လေး သွားသောက်နိုင်ပါစေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ပေးတဲ့ ဂလုနဲ့..ဆုရပါစေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 383
တောတွင်းပျော် says: ကျုပ်သာဆို ဘိုနီ့ ခွက်ပက်လက်ကို ဆွဲလုသောက်လိုက်မှာ။
ခင် ခ says: ခွေးကျဆိမ့်သောက်တာများကွယ်
uncle gyi says: ခွေးကျသောက်ရပြီး
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: @ကိုတောပျော်
aye.kk says: စာခေါင်းစည်းလေးဖတ်ပြီး
ခင်ဇော် says: သများ ဘွမှာလည်း
တစ်နပ်စာ !!!!! Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2373
aye.kk says: ကောင်းလိုက်တာ ခင်ဇော်ရေ….။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အန်တီအေးး